Internet Download Manager 6.12 Build5Beta Free...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Internet Download Manager 6.12 Build5Beta လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Update လေးထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ...! ကျွန်တော်လည်း အခုတစ်လေား အလုပ်တွေ ရှုပ်နေလို့ မတင်ဖြစ်တာပါ..! Update ထွက်တဲ့ Software လေးတွေတော့ ဂရုစိုက်ပြီးတင်ပေးနေမှာပါ...! IDM အကြေင်းကတော့ အားလုံးသိနေပြီးသား ဖြစ်သောကြောင့် ရှင်းမပြတော့ပါဘူး...! Patch ဖိုင်လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်...! အောက်မှာ Mediafire လေးဖြင့် တင်ပေးထားပါတယ်...!
" ဒီမှာယူသွားပါ..." ( 4. 75 MB )
No Response to "Internet Download Manager 6.12 Build5Beta Free...!"